आज फेरि यति धेरै घट्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ…… – SUDUR MEDIA
April 23, 2021 April 23, 2021 AdminLeaveaComment on आज फेरि यति धेरै घट्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा कारोबार हुँदैछ……
आज शुक्रबारको दिन अघिल्लो दुई दिन बढेको सुनको मूल्य फेरि घटेको छ । आज बैशाख १० गते शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो । आजको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बुधबार र बिहीबार सुन तोलामा नै १५०० रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो । बिहीबार साताकै महंगो मूल्य तोकिएर सुन प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको थियो । साताभरमा सुन तोलामा एक हजार २०० रुपैयाँले बढोत्तरी भएको छ । बैशाख ३ गते, शुक्रबार प्रतितोला ९० हजार ५०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको सुन त्यसयता वृद्धि भएको हो ।
यस साताको मंगलबार र शुक्रबार मात्र सुनको मूल्य सामान्य रुपमा घटेको महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ । शुक्रबार सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । यस दिन चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले गिरावट भएर प्रतितोला एक हजार ३२० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । बिहीबार चाँदी तोलामा २५ रुपैयाँले उकालो लागेर प्रतितोला एक हजार ३३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी महासंघको तथ्यांक हेर्दा साताभरमा चाँदी प्रतितोला २० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । गत साताको शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । त्यसपछिका तीन दिन चाँदीको भाउ स्थिर रहेतापनि बैशाख ७ गतेपछि भने चाँदीको भाउमा बढोत्तरी भयो । बिहीबार साताकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार भने घटेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः यस्तो छ शुक्रबारको विदेशी मुद्रा बिक्री विनिमयदर ! नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिदमूल्य ११९ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीमूल्य १२० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने युरोपियन युरो एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ ।
अन्तत: मुख्यमन्त्रि शेरधन राई पत्नी जाङ्बु शेर्पाले बालिका खड्काबारे मुख खोलिन – प्रमाण भेटिए म आफै श्रीमानलाई का.रबाहीको कठघरामा उभ्याउन तयार छु